एन्फा अध्यक्ष भन्छन्- रंगशालामा क्वारेन्टिन नबनाऔँ, आवश्यक ठाउँ हामी खोज्छौँ
बुधबार, जेठ १४, २०७७Wed, May 27, 2020
निको भएका २२८६८२७
अपडेटः बुधबार, जेठ १४, २०७७ । ०७:५५ बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
नेपाल लाइभ शुक्रबार, जेठ ९, २०७७, १५:०६
काठमाडौं- अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले दशरथ रंगशालाको मैदानमा क्वारेन्टिन बनाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। त्यसले राम्रो भइसकेको मैदान शून्यमा पुग्ने र पछि फर्किन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ सहिद स्मारक लिग समितिले गएको ए डिभिजन लिगको प्राविधिक तथा तथ्यांक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेर्पाले यस्तो बताएका हुन्। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण सिर्जित परिस्थितिमा आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको तर मैदान बिगार्न नहुनेमा पनि उति नै सचेत रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले लकडाउनको समयमा पनि मैदानको रेखदेख भइरहेको छ। त्यसैले त्यहाँ क्वारेन्टिन नराखिदिन अनुरोध गर्दछौँ। त्यहाँ मैदान बिग्रियो भने मैदानको भाग फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्नेछ। बरु अन्य ठाउँको पहिचान र सहयोगका लागि एन्फाले काम गर्नेछ तर मैदानमा नराखौँ’ उनले भने।
एन्फाले यसअघि नै आफूसँग भएको दुईवटा एम्बुलेन्स कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग होस् भनेर ललितपुर महानगरपालिकालाई सञ्चालनका लागि दिइसकेको छ। यस्तै एन्फाले आफ्ना एकेडेमीका भवनलाई आवश्यक परे क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग गर्न खुला रहेको पनि बताइसकेको छ। जसअनुसार दुई नम्बर प्रदेशले एन्फाको रौतहटमा रहेको महिला फुटबल एकेडेमी भवन क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोगसमेत गरिरहेको छ।
अब खेलकुद गतिविधि सुरु गर्नुपर्छ
कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका राखेपका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विस्तारै पूरा तयारी गरेर खेल गतिविधिमा फर्कनुपर्ने तर्फ संकेत गरे।
‘चलिरहेको बी डिभिजन पनि कोरोनाकै कारण रोकियो। सबैको स्वास्थ्य जाँच गरेर खाली मैदानमा खेल गर्ने छलफल भइरहँदा कोरोना बढेर फेरि तर्साउने अवस्था आयो। अब विस्तारै खेल क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनु त पर्छ नै। हौइन भने भयावह अवस्था आउन सक्छ’ उनले भने।
‘लकडाउन कहिले कतिसम्म जाने हो भविष्यवाणी गर्ने अवस्था छैन। सबै सुरक्षित हुने र खेल पनि चलायमान हुने स्थिति छिटो मिलाउने गर्नुपर्छ। कम्तिमा पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई खेलमा लगाइरहन सक्नुपर्छ। कम क्षति भएका ठाउँबाट सुरु गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ’ उनले भने।
चौरजहारी घटना: २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी, अनुसन्धानका लागि १० दिनको म्याद
वीरगंजमा थप २१ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, निको हुनेको संख्या १७६ पुग्यो
विश्वभर कोरोना : मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ५० हजार नाघ्यो
समस्यामा रहेका पारा तेक्वान्दो खेलाडीलाई राहत कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका पारा तेक्वान्दो खेलाडीलाई नेप्लिज तेक्वान्दो एकेडे... बुधबार, जेठ ७, २०७७
घरबाट कराते प्रशिक्षण नेपाल वादोरियो कराते डो सङ ब्ल्याक बेल्ट कमिटीको आयोजनामा लकडाउनको समयमा आफ्नो घरभित्र रहेर गरिने शारीरिक ब्यायामहरुको भिडियोर्मत नै... बुधबार, जेठ ७, २०७७
नीति तथा कार्यक्रमले बिर्सिएको खेलकुद, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन कठीन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिइयो। एकातर्फ कोरोनाको कहर अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम... आइतबार, जेठ ४, २०७७
चौरजहारी घटना: २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी, अनुसन्धानका लागि १० दिनको म्याद बुधबार, जेठ १४, २०७७
बेलायतमा कोरोना बिरामीका लागि रेम्डेसिभिरको क्लिनिकल ट्रायलको अनुमति बुधबार, जेठ १४, २०७७
वीरगंजमा थप २१ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, निको हुनेको संख्या १७६ पुग्यो बुधबार, जेठ १४, २०७७
एमसिसी संसद्‍को यही अधिवेशनबाट पास होला? बुधबार, जेठ १४, २०७७
विश्वभर कोरोना : मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ५० हजार नाघ्यो बुधबार, जेठ १४, २०७७
मध्यम वर्गले नगुमाउँदासम्म विद्रोह हुँदैन : रामेश्वरप्रसाद खनाल [अन्तर्वार्ता] मंगलबार, जेठ १३, २०७७
जनार्दन शर्माले तथ्य लुकाएको भन्दै संसदमा होहल्ला मंगलबार, जेठ १३, २०७७
कमल थापासँग खेल संवाद : ‘खेलकुदले नै राजनीतिमा डटिरहन सकेको हुँ’ ऋग्वेद शर्मा
भुपेन्द्रको यात्रा - माओवादीको कुटाइदेखि सागको स्वर्णसम्म [अन्तर्वार्ता] सराेज तामाङ
विराजसँग संवाद : खेल, प्रेम र लकडाउन सराेज तामाङ
नेपालमा मार्सल आर्ट : तेक्वान्दोलाई हेर्दा अञ्जना शिवाकोटी
फुटबलमा शारीरिक दुरीको चिन्ता नेपाल लाइभ
कठीन परिस्थितिमा खेलाडी किनबेचको चर्चा नेपाल लाइभ
एकदिवसीय मान्यताको दुई वर्ष : उकालो कि ओरालो? सराेज तामाङ
खेलाडी किनबेचका ‘भूकम्प’ शनिबार, जेठ १०, २०७७
पारित भयो खेलकुद विधेयक : के छन् नयाँ विषय? बिहीबार, जेठ ८, २०७७
फर्किएको शान्त फुटबल आइतबार, जेठ ४, २०७७
स्वास्थ्य मन्त्रीको अदूरदर्शी निर्णयले फैलिएको कोरोना परीक्षणमा १५ हजारको भ्रम बुधबार, जेठ ७, २०७७
मनिषाको बहानामा एउटा देशको सम्प्रभुतामाथि औंला ठड्याइरहेका पिछलग्गु पत्रकार शनिबार, जेठ १०, २०७७
नेकपा सचिवालयमा कुलमान घिसिङ र खड्ग विष्टलाई प्रश्न- एमसिसी किन आवश्यक पर्‍यो? शनिबार, जेठ १०, २०७७